Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Mandray ny serivisy vaovao avy amin'ny American Airlines i Jamaika
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Jamaika dia nandray ny serivisy an'habakabaka vaovao avy any Philadelphia International Airport (PHL) mankany amin'ny Kingston's Norman Manley International Airport (KIN) avy amin'ny American Airlines, manome safidy hafa mety ho an'ireo mpandeha avy any avaratra atsinanana mba ho any amin'ny nosy. Niainga tamin'ny 4 Novambra ny sidina fanokanana ary nankalazaina tamin'ny fety nentim-paharazana maneho ny kolontsaina mafana sy mavitrika ao amin'ny nosy rehefa tonga tany Jamaika.
Nivory ny solontena avy amin'ny Jamaika, American Airlines, ary ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Philadelphia mba hitsena ireo mpandeha ho any Jamaika amin'ny sidina vaovao.
Ireo sidina vaovao ireo mankany Jamaika avy any Philadelphia dia manome safidy mety fanampiny ho an'ireo mpitsidika sy teratany Karaiba avy any avaratra atsinanan'i Etazonia handeha ho any amin'ny nosy.
Fotoana tsara indrindra amin'ny taona mba hisy fiantraikany amin'ny fahatongavan'ny vanim-potoana ambony ao Jamaika.
"Tena faly izahay mandray ity serivisy vaovao ity avy amin'ny mpitatitra mpandeha an-habakabaka lehibe indrindra, American Airlines," hoy ny talen'ny fizahantany, Jamaika, Donovan White. “Ireo sidina vaovao ireo mankany Jamaika avy any Philadelphia dia manome safidy mety fanampiny ho an'ireo mpitsidika sy teratany Karaiba avy any avaratra atsinanan'i Etazonia handeha ho any amin'ny nosy. Miaraka amin'ny mponina am-pielezana maro monina ao amin'io faritra io, dia ho mora kokoa noho ny hatramin'izay ny manidina mahitsy Hiverina any amin'ny Kingston. Velom-pankasitrahana bebe kokoa an'i Amerika izahay tamin'ny fanokanana ity serivisy fanampiny ity amin'ny fotoana mety indrindra amin'ny taona mba hisy fiantraikany amin'ny fahatongavan'i Jamaika amin'ny vanim-potoana ambony. "
Nivory teo am-bavahady ny solontena avy any Jamaika, American Airlines, ary ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Philadelphia mba hitsena ny mpandeha mandeha any Jamaika amin'ny sidina vaovao, anisan'izany ireo mpandraharaha mpitety faritany am-polony nampiantrano ny fitsangatsanganana ho an'ny fianakaviana avy amin'ny Jamaica Tourist Board. Ho fanampin'ny fanapahana kasety, dia nampiala voly ny rehetra tamin'ny feon'ny mozika Jamaikana sy ny fonosan-damosina Jamaikana maimaim-poana. Ny kaikitry ny maivana maimaim-poana, anisan'izany ny paty Jamaikana nentim-paharazana, dia natolotra ihany koa avy amin'ny Irie Entrée, trano fisakafoanana Jamaikana tena izy any Philadelphia, manome tsiro ny nosy. Mbola nanandrana ny kafe Blue Mountain malaza any Jamaika ny mpandeha.
Araka ny voalazan'i Jim Tyrrell, Lehiben'ny Revenue Officer, Philadelphia International Airport, Kingston dia toerana iray mahafeno ny fepetra takian'ny mpandeha ankehitriny.
“Rehefa nanohy ny diany ny mpandeha, ny toerana ambony indrindra hitanay olona nandeha dia ireo izay manana
masoandro, fasika ary tora-pasika ary koa izay ahafahan'izy ireo mitsidika ny fianakaviany sy ny namany, ”hoy i Tyrell. “Manamarina ny boaty rehetra i Kingston. Tsara tarehy izy io ary iray amin'ireo toerana tsara indrindra ho an'ny fianakaviana sy ny namana any ivelan'i Philadelphia. Ankehitriny dia afaka manidina avy amin'ny seranam-piaramanidina iray izy ireo ary tonga haingana kokoa any amin'ireo namana sy tora-pasika. ”
Rehefa nigadona tao Jamaika, ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Norman Manley (KIN) an'i Kingston dia nandray ny sidina tamin'ny alalan'ny fiarahabana nentim-paharazana sy ny sainam-pirenena, niaraka tamin'ny saina Jamaikana sy Etazonia nifandrombaka tao amin'ny cockpit ny fiaramanidina. Ireo tompon'andraikitra avy amin'ny Birao Mpizahatany Jamaikana, Minisiteran'ny Fizahantany sy Jamaika Hotel ary
Nanatrika ny fiarahabana ireo mpandeha nidina ihany koa ny Fikambanan'ny Fizahantany, raha nisy fampisehoana mozika mivantana nahery vaika tao ambadika. Notolorana fanomezana ho an’ireo mpanamory sy mpiasan’ny sidina, tamin’ny fomba tena nosy, ho fanehoana fankasitrahana ny fanompoan’izy ireo nandritra ny fandraisana fandraisana.
Ny sidina tsy an-kiato an'ny American Airlines mankany Kingston (KIN) dia miasa in-telo isan-kerinandro amin'ny alatsinainy/Alakamisy/Alahady avy any Philadelphia (PHL) miainga amin'ny 9:40 maraina ary tonga ao Kingston (KIN) amin'ny 1:32 hariva. Ity serivisy vaovao ity dia Amerikana
Lalana faharoa tsy an-kiato an'ny zotram-piaramanidina avy any PHL mankany Jamaika, mameno ny sidina tsy an-kiato isan'andro an'ny mpitatitra mankany Montego Bay. Ny fandaharam-potoan'ny sidina dia mety hiova tsy misy fampandrenesana, koa entanina ny mpandeha hijery ny www.aa.com mba hahitana ny fandaharam-potoana farany indrindra.
Nanomboka tamin'ity volana ity, ny American Airlines dia nanombana ny fiaramanidina ampiasaina amin'ny sidina mankany Montego Bay (MBJ) avy amin'ny foibeny lehibe indrindra ao Dallas/Fort Worth (DFW), Miami (MIA), ary Philadelphia (PHL) mba hampiasa ny sakany vaovao. - Boeing 787-8 Dreamliner ho an'ireo asa ireo. Ny mpitatitra dia miasa amin'ny sidina tsy an-kiato isan'andro mankany amin'ny toerana haleha avy any amin'ny tanàna maromaro any Etazonia anisan'izany Miami (MIA), New York (JFK), Philadelphia (PHL), Chicago (ORD), Boston (BOS), Dallas/Fort Worth (DFW, ary Charlotte (CLT).